အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
မေး-510N စီးရီး အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော များမှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သငျ့လျြောသော ဘို့ အခင်အရှင် နှင့် actuators တွင် စွန့်စားရသော ပေါကျကှဲခွငျး-အထောက်အထား environment.AOX ရဲ့ တွင်novative ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းs တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ လက်ခံရရှိ အလွန် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ မေး-510N စီးရီး အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော များမှာ စိတ်ချရသော, လုံခွုံသော နှင့် အဆင်ပြေ, နှင့် အဆိုပါ အားသာချက်များ ၏ compatibility နှင့် အလေ့အကျင့်။
ညွှန်ပြချက်ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုအလွယ်တကူနှင့်တိကျစွာရေးကိရိယာများမပါဘဲသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်မေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထား၏ cam ။
မေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာများအတွက် 2. Wired terminal ကို
3. လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်, အနုပညာချိတ်ဆက်သံမဏိအဓိကဝင်ရိုးနှင့် mounting bracket က NAMUR စံများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း
2-SPDT စက်မှု ပွောငျးလဲ
1. ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာမေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့်မြင့်မားသောတိကျအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
2. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာတိုင်းထုတ်လုပ်ဇာတ်စင်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးပြည့်စုံထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးစနစ်အားရှိသည်။
A: ကုန်တင်အလေးချိန်, packding အရွယ်အစားနှင့်သင့်အပေါ်မူတည် နိုင်ငံသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဒေသ, etc
မေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany အမည်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ရှိသည်နိုင်သလား သင့်ရဲ့အမေး-510N စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက် ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာသို့မဟုတ်အထုပ်?
မေး: သင်မေး-510N ဘို့စတော့ရှယ်ယာများပါနဲ့ စီးရီးအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ?
hot Tags:: အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်